မန္တလေး သပိတ်ကျင်း တွင် ကားလမ်းချဲ့ရာ မှ ရွှေကြောတွေ့သည် ဟု ဆိုကာ လူ ထောင်နဲ့ချီ လာရောက် တူးဖော်နေ – Na Pann San
Na Pann | August 16, 2020 | Local News | No Comments
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သပိတ်ကျင်း မြို့နယ် ချောင်းကြီးကျေးရွာ သုံး ထပ်ကွေ့ အနီး တွင် ကားလမ်း တိုးချဲ့ရန် စက်ယန္တရား များဖြင့် တူးဖော်ရာမှ ရွှေကြောတွေ့သည်ဟု ဆိုကာ ဒေသခံရာနှင့်ချီ လာရောက်၍ တူးဖော် မှုများပြုလုပ် လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် ချောင်း ကြီးကျေးရွာ အုပ်စု သုံးထပ်ကွေ့အနီးတွင် သြဂုတ် ၁၅ ရက်က လမ်းတိုးချဲ့ရန် မြေသား တူးဖော်မှုများ ဆောင်ရွက်ရာမှ ရွှေကြောပေါ် သည်ဟု ဆိုကာ အဆိုပါသုံးထပ်ကွေ့အနီး နေရာသို့ လူဦးရေ ရာနှင့်ချီ အလု အယက်ဖြင့် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည် ဟု ဒေသခံတစ် ဦးက ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
“သုံးထပ်ကွေ့ လမ်းချဲ့တာ ကနေပြီးတော့ ရွှေကြောတွေ့တယ် ဆိုလို့ လူတွေ အုတ်အော်သောင်းတင်း နဲ့ လာရှာနေကြတာ ။ သတင်းစဖြစ်တာကတော့ ညဦးပိုင်းလောက် ပဲ။ ည ၁၀ နာရီလောက် ရောက်တော့ လူက အရမ်းများ လာတယ်” ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။.
ယင်းသို့ ရွှေကြောအကွက်သစ်ပေါ် သည် ဟု သတင်းဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် ပတ်သက် ၍ ချောင်းကြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဖိုးဆန်း က “လူဦးရေက ၆၀၀ လောက်ရှိမယ်။လမ်း ချဲ့တာကနေ ရွှေကြောလေးပုံစံတွေ့တာက နေ ခါးပိုက်လေးထဲ ထည့်ယူသွားတဲ့ လူတစ် ယောက်ကနေ စလိုက်တာ ။ ရွှေက ပြောသ လောက် မပါပါဘူး ။
အဲဒီကနေမှ သုံးယောက်စ အုပ်စု လေးယောက်စအုပ်စုတွေ ရောက်လာ ပြီး နောက်ပိုင်း အုန်းအုန်းကျက်ကျက်ဖြစ်သွား တာ။ အဲဒီလိုလူအုပ်ကို လမ်းက သုံးထပ်ကွေ့ ဆိုတော့ အန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက် ယာဉ် ကြောကိုပဲ ရှင်းလင်းပေးနေပြီး လူအုပ် ကို လည်း ပြောလို့ရ သလောက် ပြောဆိုပြီး ပြန် လွှတ်ေ နပါတယ်။ အခုအခြေအနေကို လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ စသုံးလုံး ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ရာ အိမ်မှူးဆယ်အိမ်မှူး စတဲ့သူတွေ နဲ့ ဖြေရှင်း ပေးနေပါတယ်။ ဒီလူတွေကို မနက်မိုးလင်းတဲ့ အထိ လူစုမကွဲမချင်း စောင့်ပြီးတော့ လုံခြုံ ရေးယူပေးမှာပါ။ ကားအသွားအလာကအစ အန္တရာယ်မရှိအောင် ထိန်းပေးနေတာပါ။
လူစုကတော့ အစပိုင်းက ၆၀၀၊ ၁၀၀၀ လောက် ထိရောက်လာပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ လူစုက ပါးလာပြီး ကွဲစပြုနေပါပြီ။ သတင်းက ကောလာဟလလိုမျိုး ပြန့်သွားတာ” ဟု သြဂုတ် ၁၅ ရက် ည ၁၂ နာရီဝန်းကျင်အချိန်ခန့်တွင် ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
“လမ်းနယ်မြေချဲ့ရင်းနဲ့ စက်ကြီးတွေ ထိုးရာကနေ အပေါ်ယံကြောလေးတွေ့တာ ။ ဒါ ကို ဘိလပ်မြေအိတ်တွေ နဲ့ သယ်ယူနေကြ ပြီး ဘိလပ်မြေ အိတ်တစ်အိတ်ကို လေးငါး ခြောက်ထောင်ရတဲ့ သူလည်းရှိသလို နှစ် သောင်း၊ သုံးသောင်းရတဲ့ သူလည်း ရှိတယ် ။ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက်တော့ မတူကြ ဘူး” ဟု ဒေသခံ ကိုအောင်စိုးက ပြောကြားပါတယ်။
ဒေသအခေါ် ရွှေတော ဟု ခေါ်ဝေါ်လေ့ ရှိသည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သပိတ်ကျင်း မြို့နယ် တွင် ယင်းသို့ မြေအပေါ်ယံကြောပေါ် မှ ရွှေတူးဖော်ရရှိမှုများ မကြာခဏ တွေ့ရှိရ လေ့ရှိကြောင်း သိရပြီး ယင်းသို့ တွေ့ရှိသည့် နေရာများတွင် မြေအောက်သို့ ဆက်လက်တူး ဖော်ပါက တွေ့ရှိမှု မရှိသည် များလည်းရှိ ကြောင်း သိရပါတယ်။
“ရွှေက ‌အပေါ်ယံတင် တွေ့တာရှိတယ် ၊ မြေအောက် အရမ်းမနက်ပဲ ဒေသခံတွေ တွေ့တာမျိုးပေါ့ ၊ ဒါမျိုးက ဒီရွှေတောမှာ တော့ မကြာခဏ ဆိုသလို ကွက်သစ်ပေါ်တယ် ဆိုပြီး ဖြစ် နေကျပါ ၊ ဒေသခံတွေ ပဲ တူးကြရကြ ပြီးရင် ပြီးသွားတာမျိုးပါ ၊ဒီလို‌အပေါ်ယံမှာ တင်တွေ့တာမျိုး ကျတော့ ကုမ္ပဏီ တွေ က အလုပ်ဝင် မလုပ်ပါဘူး ၊ ကုမ္ပဏီတွေ စီးပွားမဖြစ်ပေမယ့် ဒေသခံတွေ က တော့ စီးပွားဖြစ်ကြတာပေါ့ ” လို့ အဲ့သည် နားမှာ ရှိတဲ့ ရပ်မိရပ်ဖ တဦးကပြော ပါတယ်။
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး သပိတျကငျြး မွို့နယျ ခြောငျးကွီးကြေးရှာ သုံး ထပျကှေ့ အနီး တှငျ ကားလမျး တိုးခြဲ့ရနျ စကျယန်တရား မြားဖွငျ့ တူးဖျောရာမှ ရှကွေောတှသေ့ညျဟု ဆိုကာ ဒသေခံရာနှငျ့ခြီ လာရောကျ၍ တူးဖျော မှုမြားပွုလုပျ လကျြရှိကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
ဖွဈစဉျမှာ သပိတျကငျြးမွို့နယျ ခြောငျး ကွီးကြေးရှာ အုပျစု သုံးထပျကှအေ့နီးတှငျ သွဂုတျ ၁၅ ရကျက လမျးတိုးခြဲ့ရနျ မွသေား တူးဖျောမှုမြား ဆောငျရှကျရာမှ ရှကွေောပျေါ သညျဟု ဆိုကာ အဆိုပါသုံးထပျကှအေ့နီး နရောသို့ လူဦးရေ ရာနှငျ့ခြီ အလု အယကျဖွငျ့ ရောကျရှိလာခွငျးဖွဈသညျ ဟု ဒသေခံတဈ ဦးက ပွောကွားခဲ့ ပါတယျ။
“သုံးထပျကှေ့ လမျးခြဲ့တာ ကနပွေီးတော့ ရှကွေောတှတေ့ယျ ဆိုလို့ လူတှေ အုတျအျောသောငျးတငျး နဲ့ လာရှာနကွေတာ ။ သတငျးစဖွဈတာကတော့ ညဦးပိုငျးလောကျ ပဲ။ ည ၁၀ နာရီလောကျ ရောကျတော့ လူက အရမျးမြား လာတယျ” ဟု ဒသေခံတဈဦးက ဆိုပါတယျ။.
ယငျးသို့ ရှကွေောအကှကျသဈပျေါ သညျ ဟု သတငျးဖွဈပျေါမှုနှငျ့ ပတျသကျ ၍ ခြောငျးကွီးကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးဖိုးဆနျး က “လူဦးရကေ ၆၀၀ လောကျရှိမယျ။လမျး ခြဲ့တာကနေ ရှကွေောလေးပုံစံတှတေ့ာက နေ ခါးပိုကျလေးထဲ ထညျ့ယူသှားတဲ့ လူတဈ ယောကျကနေ စလိုကျတာ ။ ရှကေ ပွောသ လောကျ မပါပါဘူး ။
အဲဒီကနမှေ သုံးယောကျစ အုပျစု လေးယောကျစအုပျစုတှေ ရောကျလာ ပွီး နောကျပိုငျး အုနျးအုနျးကကျြကကျြဖွဈသှား တာ။ အဲဒီလိုလူအုပျကို လမျးက သုံးထပျကှေ့ ဆိုတော့ အန်တရာယျဖွဈမှာစိုးတဲ့အတှကျ ယာဉျ ကွောကိုပဲ ရှငျးလငျးပေးနပွေီး လူအုပျ ကို လညျး ပွောလို့ရ သလောကျ ပွောဆိုပွီး ပွနျ လှတျေ နပါတယျ။ အခုအခွအေနကေို လှတျ တျောကိုယျစားလှယျ၊ စသုံးလုံး ရဲတပျဖှဲ့၊ ရာ အိမျမှူးဆယျအိမျမှူး စတဲ့သူတှေ နဲ့ ဖွရှေငျး ပေးနပေါတယျ။ ဒီလူတှကေို မနကျမိုးလငျးတဲ့ အထိ လူစုမကှဲမခငျြး စောငျ့ပွီးတော့ လုံခွုံ ရေးယူပေးမှာပါ။ ကားအသှားအလာကအစ အန်တရာယျမရှိအောငျ ထိနျးပေးနတောပါ။
လူစုကတော့ အစပိုငျးက ၆၀၀၊ ၁၀၀၀ လောကျ ထိရောကျလာပမေယျ့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့တော့ လူစုက ပါးလာပွီး ကှဲစပွုနပေါပွီ။ သတငျးက ကောလာဟလလိုမြိုး ပွနျ့သှားတာ” ဟု သွဂုတျ ၁၅ ရကျ ည ၁၂ နာရီဝနျးကငျြအခြိနျခနျ့တှငျ ပွောကွားခဲ့ ပါတယျ။
“လမျးနယျမွခြေဲ့ရငျးနဲ့ စကျကွီးတှေ ထိုးရာကနေ အပျေါယံကွောလေးတှတေ့ာ ။ ဒါ ကို ဘိလပျမွအေိတျတှေ နဲ့ သယျယူနကွေ ပွီး ဘိလပျမွေ အိတျတဈအိတျကို လေးငါး ခွောကျထောငျရတဲ့ သူလညျးရှိသလို နှဈ သောငျး၊ သုံးသောငျးရတဲ့ သူလညျး ရှိတယျ ။ တဈယောကျ နဲ့ တဈယောကျတော့ မတူကွ ဘူး” ဟု ဒသေခံ ကိုအောငျစိုးက ပွောကွားပါတယျ။
ဒသေအချေါ ရှတေော ဟု ချေါဝျေါလေ့ ရှိသညျ့ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး သပိတျကငျြး မွို့နယျ တှငျ ယငျးသို့ မွအေပျေါယံကွောပျေါ မှ ရှတေူးဖျောရရှိမှုမြား မကွာခဏ တှရှေိ့ရ လရှေိ့ကွောငျး သိရပွီး ယငျးသို့ တှရှေိ့သညျ့ နရောမြားတှငျ မွအေောကျသို့ ဆကျလကျတူး ဖျောပါက တှရှေိ့မှု မရှိသညျ မြားလညျးရှိ ကွောငျး သိရပါတယျ။
“ရှကေ ‌အပျေါယံတငျ တှတေ့ာရှိတယျ ၊ မွအေောကျ အရမျးမနကျပဲ ဒသေခံတှေ တှတေ့ာမြိုးပေါ့ ၊ ဒါမြိုးက ဒီရှတေောမှာ တော့ မကွာခဏ ဆိုသလို ကှကျသဈပျေါတယျ ဆိုပွီး ဖွဈ နကေပြါ ၊ ဒသေခံတှေ ပဲ တူးကွရကွ ပွီးရငျ ပွီးသှားတာမြိုးပါ ၊ဒီလို‌အပျေါယံမှာ တငျတှတေ့ာမြိုး ကတြော့ ကုမ်ပဏီ တှေ က အလုပျဝငျ မလုပျပါဘူး ၊ ကုမ်ပဏီတှေ စီးပှားမဖွဈပမေယျ့ ဒသေခံတှေ က တော့ စီးပှားဖွဈကွတာပေါ့ ” လို့ အဲ့သညျ နားမှာ ရှိတဲ့ ရပျမိရပျဖ တဦးကပွော ပါတယျ။
ယနေ့မနက်တွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှ COVID 19 လူနာအမှတ် (၅) သေဆုံးကြောင်း ထုတ်ပြန်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မတွေ့သေး တဲ့ နိုင်ငံ ( ၅၀ )ကို လေ့လာကြည့်လိုက် တဲ့ အခါ
ရန်ကုန် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များအားလုံး ခန္ဓာကိုယ်ထဲ Microchips ထည့်ပြီး မှတ်ပုံတင်ရမည်
ဆရာမကြီး ၏ မီးကျွမ်း ပိုက်ဆံများအား ဗဟိုဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက် ၍ ငွေကျပ်( ၂၃ )သိန်းကျော်ပြန်လည် လဲလှယ်ရရှိ